On-line ကိုသံမဏိ - တရုတ် Langzhi ဂဟေဆော်ခြင်းပစ္စည်းကိရိယာ
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ဒီစနစ်ကပိုက်-အောင်စက်နှင့်အတူ ganged ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလိုအပ်သောပေါ် မူတည်. ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံအများအပြားအမျိုးမျိုးနှင့်အတူလိုက်ဖက်နိုငျသညျ။ : P + T ကို: လက်သီးရိုက်ချက်များအတွက်ပလာစမာ (တစ်ဦးကိုပစ်ခတ် 8 မီလီမီတာသို့မဟုတ်အထူပန်းကန် bellowing ဖြတ်သန်းနိုင်) တစျဦး၏ပျမ်းမျှဖြောင့်မျဉ်းကြောင်းဖြစ်ဂဟေချုပ်ရိုးလုပ်လှမျးမိုးပြံ့နှံ့အောက်ခြေအဘို့မွေးစားလိမ့်မည်။ ဒုတိယရိုက်ချက်အဘို့, အာဂွန်ကို arc welding စက်ဘေးနံရံ undercut .. T-+ P ကို ​​+ T ကိုမပါဘဲချောမွေ့မျက်နှာပြင်အောင်ပြုပြင်အတွက်အသုံးပြုလိမ့်မည်: ပထမဦးဆုံးရိုက်ချက်, အာဂွန်ကို arc ဂဟေနှင့်အတူ preheat ဖြစ်ပါသည့် ...
ဒီစနစ်ပိုက်-အောင်စက်နှင့်အတူ ganged ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလိုအပ်သောပေါ် မူတည်. ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံအများအပြားအမျိုးမျိုးနှင့်အတူလိုက်ဖက်နိုငျသညျ။
: P + T ကို: လက်သီးရိုက်ချက်များအတွက်ပလာစမာ (တစ်ဦးကိုပစ်ခတ် 8 မီလီမီတာသို့မဟုတ်အထူပန်းကန် bellowing ဖြတ်သန်းနိုင်) တစျဦး၏ပျမ်းမျှဖြောင့်မျဉ်းကြောင်းဖြစ်ဂဟေချုပ်ရိုးလုပ်လှမျးမိုးပြံ့နှံ့အောက်ခြေအဘို့မွေးစားလိမ့်မည်။ ဒုတိယရိုက်ချက်အဘို့, စက်ကို welding အာဂွန်ကို arc ဘေးနံရံ undercut မရှိဘဲမျက်နှာပြင်ချောမွေ့အောင်ပြုပြင်အတှကျအသုံးပွုပါလိမ့်မည် ..
T က + P ကို ​​+ T ကို: ပထမဦးဆုံးရိုက်ကူးအာဂွန်ကို arc ဂဟေနှင့်အတူ preheat ဖြစ်ပါသည်, ဒုတိယ, shot ပလာစမာ permeate ဂဟေသုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်နှင့်တတိယရိုက်ချက်အာဂွန်ကို arc ဂဟေ အသုံးပြု. ပြုပြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်လှပသောပြင်ပဂဟေချုပ်ရိုး module ကိုမျက်နှာပြင်လုပ်ရရှိနိုင် welding-ဝါယာကြိုးထည့်ခြင်း ။ ဒီစနစ် 1.8mm-12mm အထူအက်စ်အက်စ်ပိုက်လုပ်ကြံလီဆယ်မှုများလိုင်းများအတွက်သင့်လျော်သည်။
T က + T ကို + T ကို:3လုပ်ကြံလီဆယ်မှုများလိုင်း welding အပေါ်အစက်အပြောက် welding နေကြသည်ကို set up, muti-အနုတ်လက္ခဏာတိုင်ဂဟေနည်းပညာချမှတ်ခြင်းအားဖြင့်, ဂဟေဆော်မြန်နှုန်းကယ်လိုရီထပ်နေဖြင့်တိုးတက်ပါလိမ့်မည်။ ပထမဦးစွာရိုက်ချက်ကို arc-လွှဲ function ကိုရှိသည်, ကထိထိရောကျရောရေနံနှင့်ညစ်ညူးကိုဖယ်ရှားနိုင်နှင့်အလုပ်-piece အဘို့အ-အပူ pre ရန်။ ရိုက်ချက် permeate ဂဟေနှင့်တတိယရိုက်ချက်အဘို့ဖြစ်၏ Send ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤသည်ကိုထိရောက်စွာဒါဟာကျယ်ပြန့် food- သန့်ရှင်းတန်းပြွန် / အပူ-လဲလှယ်ပြွန် / condenser ပြွန်နှင့် Ti Tube များအတွက်ဂဟေသို့ usded ဖြစ်ပါတယ်စသည်တို့ကိုရောစပ် / ပေါက် / သဲ-ပေါက်ဖြစ်စေတဲ့ရှောင်ရှားနိုင်
ဂဟေဆော်မြန်နှုန်း 0-3000mm / မိနစ်
ယခင်: jointed ဘုတ်အဖွဲ့ဂဟေ